Waad Heli Kartaa Web 2.0 Dhibaato Marka ... | Martech Zone
Kadib markaad la kulantay qof cusub oo isku xira shabakadaha bulshada, Dr. Thomas Ho, Waxaa i soo jiitay mid ka mid ah adeegyadii uu adeegsaday, Profilactic.com.
Fiidiyowga kor ku xusan (dhagsii boostada) waa aalad aan ku dhisay anigoo adeegsanaya adeegga Profilactic. Waa liis ay ku qoran yihiin dhammaan shabakadaha '2.0' ee aan ka tirsanahay… waxaad ka heli kartaa naqshadayda cusub Ku saabsan bogga. Waxaan u maleynayaa inaan dhibaato haysto!
Haddii aad ka tirsan tahay bogaggaas, hubi inaad igu darto liiska asxaabtaada! 😉
Tags: pr qaybinta
Jan 3, 2008 saacadu markay ahayd 9:03 PM
hehe, taasi waa wax aad u badan meesha aad ka heshay 🙂 Waxaan ku sii socdaa degello aad u tiro badan oo ah websaydhada 2.0 laakiin ma jiraan wax la barbardhigay tan 😉
Hal su'aal, intee ka mid ah goobahaas aad runti firfircoon tahay? 😉
Jan 3, 2008 saacadu markay ahayd 9:13 PM
Waxaan u maleynayaa inaan ahay mid firfircoon qiyaastii seddex meelood meel ka mid ah… kuwa kale waa kuwo goos goos ah. Mararka qaarkood ma booqan doono dhowr bilood - laakiin markaa waxaan joogi doonaa goobta saacado.
Isku soo wada duuboo? Way badan tahay!